ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီစခန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ နိုင်ငံတကာအင်ဂျီအို ဝန်ထမ်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စွဲကပ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိ။ အူခီယာအင်ဂျီအိုရုံးအားပိတ်သိမ်း၍ ဝန်ထမ်းကို ၁၅-ရက်ကြာ နေအိမ် ရောဂါခြေချုပ် ချထား။ – H2Oupdatenews
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီစခန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ နိုင်ငံတကာအင်ဂျီအို ဝန်ထမ်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စွဲကပ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိ။ အူခီယာအင်ဂျီအိုရုံးအားပိတ်သိမ်း၍ ဝန်ထမ်းကို ၁၅-ရက်ကြာ နေအိမ် ရောဂါခြေချုပ် ချထား။
oungmarine11@outlook.com 23/04/2020	2 Comments
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ၌ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ ခိုလှုံလျှက်ရှိသည့် ကော့ခ်ဘဇားစခန်းများတွင် အကူအညီပေးလျှက်ရှိသော World Vision နိုင်ငံတကာအင်ဂျီအို၏ ဝန်ထမ်း ၁-ဦးတွင် Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စွဲကပ်လျှက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အဆိုပါဝန်ထမ်းအား နေအိမ်ရောဂါခြေချုပ် ၁၅-ရက် ချထားပြီး အူခီယာ အင်ဂျီအိုရုံးအား ကြာသပတေးနေ့မှ စတင်ကာ ပိတ်ထားလိုက်သည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ ၎င်းဝန်ထမ်းမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများဖြန့်ဝေရာတွင် ပါဝင်သူဖြစ်သည်ဆို၏။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုး မိမိတို့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော မိသားစုဝင်များနှင့် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ထိတွေ့ခဲ့သည်ဟု သိရှိရကြောင်း ၎င်းအချိန်၌ အဆိုပါဝန်ထမ်းမှာ ဖျားနာခြင်း မရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်မိပါကြောင်း၊ ၎င်းအား နေအိမ်၌ သီးခြားထားရှိ စောင့်ကြည့်မည့် ရောဂါခြေချုပ်အဖြစ် လစာပြည့် ဆေးခွင့် ၁၅-ရက်ပေးထားကြောင်း World Vision အင်ဂျီအို၏ အဖွဲ့ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရန် ၎င်းဝန်ထမ်းကို ဖုန်းဖြင့် ညွှန်ကြားထားကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ရောဂါအန္တရာယ်မှ လုံခြုံမှု အကာအကွယ်ပေးရန် World Vision အနေဖြင့် အစဉ်အမြဲဦးစားပေးခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရတာဝန်ရှိသူများနှင့်ဆက်သွယ်၍ ၎င်းတို့၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုကို ရာနှုန်းပြည့် လိုက်နာလျှက်ရှိကြောင်း၊ အင်ဂျီအိုဝန်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် သတင်းမီဒီယာတို့အနေဖြင့် အဆိုပါဝန်ထမ်းနှင့် မိသားစုတို့၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှို့ဝှက်ထားရန် လိုအပ်သည်တို့ လေးစားကြရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း World Vision သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ယခု ကိစ္စကို သတိထားမိကြသည့်ယနေ့ ( ကြာသပတေးနေ့ ) ၌ပင် ကူးစက်မှု ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် အူခီယာရှိ World Vision အင်ဂျီအိုရုံးအား ပိတ်လိုက်ပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ၁၅-ရက်ကြာ သီးခြားရောဂါခြေချုပ်ဖြင့် စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဝန်ထမ်းနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူတို့ကိုလည်း စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ ၁၅-ရက်အတွင်း အသွားအလာ လှုပ်ရှားမှု ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် အကြံပြု ထားကြောင်း၊ World Vision အင်ဂျီအိုအမှုထမ်းတို့မှာ များသောအားဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ်-၁၅ တွင် တာဝန်ယူရလေ့ရှိသူများဖြစ်ကြောင်း ကော့ခ်ဘဇားအခြေစိုက် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးနှင့် အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးက ပြောဆိုသည်။
ကြာသပတေးနေ့အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် Covid-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၁၂၀ -ဦးရှိလာခဲ့ပြီး၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စွဲကပ်ခံရမှု ၃,၇၇၂ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Worldometer အရ တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့တွင် စတင်ဖြစ်ပွားသည့် Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကပ်သည် ယခုအခါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နိုင်ငံနှင့်နယ်မြေပေါင်း ၂၁၀-တို့ရှိ လူပေါင်း ၂,၆၃၈,၀၀၀ ကျော်သို့ ရောဂါကူးစက်လျှက်ရှိရာ အသက်ဆုံးရှုံးရသူပေါင်း ၁၈၄,၂၃၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
((( Dhaka Tribune., April 23, 2020, “ Int’l NGO staff working in Rohingya camp exposed to Covid-19.By: Cox’s Bazar Mahbub Alam Talukder ” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
2 Replies to “ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီစခန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ နိုင်ငံတကာအင်ဂျီအို ဝန်ထမ်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စွဲကပ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိ။ အူခီယာအင်ဂျီအိုရုံးအားပိတ်သိမ်း၍ ဝန်ထမ်းကို ၁၅-ရက်ကြာ နေအိမ် ရောဂါခြေချုပ် ချထား။”
အူခီယာဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် ၁၅ မှာ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း တာ၀န်ကျလေ့ရှိတဲ့ NGO ၀န်ထမ်းတစ်ဦး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းအရ သိရှိရပါတယ်
La mejor manera para que las mujeres pierdan grasa del estГіmago
Perder peso durante la perimenopausia. Se llama sedentarismo y la buena noticia es que podemos remediarlo con movimiento. Se mire por donde se mire, el plan resulta perfecto. La mejor manera para que las mujeres pierdan grasa del estГіmago unos segundos aguantando la postura se vuelveala posiciГіn inicial. No admitimos publicaciones reiteradas de enlacesasitios concretos de forma interesada. Conseguir un vientre plano es uno de los retos de muchos hombres y mujeres que, pasado el invierno, vuelvenasus entrenamientos y a
Deshacerse de la La mejor manera para que las mujeres pierdan grasa del estГіmago que se acumula en los famosos michelines y cartucheras se convierte en todo un reto que se vence con mucha fuerza de voluntad y constancia. No todo el mundo tiene el mismo abdomen; tampoco el origen de su grasa proviene de las mismas razones. Lo primero es llevar una alimentaciГіn saludable reduciendo el consumo de hidratos de carbono y aumentando la ingesta de frutas, verduras, carnes y pescados. Hacer ejercicio. Este tipo de abdomen se asociaapersonas altamente cualificadas, con carreras y puestos muy exigentes, adictas al gimnasio y que llevan mucho tiempo realizando la misma dieta.
6 formas de perder grasa del estГіmago de verdad y para siempre Ejercicios para adelgazar las piernas durante el embarazo Te para adelgazar yahoo esports.
ВїCuГЎl es la mejor aplicaciГіn para rastrear la dieta ceto?
Alimentosaevitar para lograr la cetosis. TambiГ©n puedes aprender sobre la dieta keto y los populares alimentos keto. Compatible ВїCuГЎl es la mejor aplicaciГіn para rastrear la dieta ceto? iPhone, iPad y iPod touch. Los usuarios Premium pueden ver quГ© alimentos tienen el mayor nivel de nutrientes, establecer objetivos de calorГ­as por comida, exportar datosaarchivos CSV, ver macronutrientes por gramo o porcentaje, establecer objetivos de macro y otro contenido exclusivo. Eso incluye la dieta ceto. Suunto 7, el reloj deportivo y ‘smart’ definitivo Men’s Health.
Previous Previous post: ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီး ကင်ဂျုံအန်မှာ သေလုနီးပါးဖြစ်လျှက်ရှိသည် သို့မဟုတ် ကင်ဂျုံအန်သေဆုံးပြီဟူသော သတင်းများမှာ ဟုတ်မှန်ပုံမရကြောင်း တောင်ကိုရီးယား တရားဝင်ပြောဆို
Next Next post: ခေါင်းဆောင်မှု ကျကွဲခြင်း နှင့် ဗီယက်နမ် သို့မဟုတ် Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ မတွေ့မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့သော နိုင်ငံ